US diplomat calls on Myanmar to accept fact-finding mission - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Jul 12 2017 06:21 AM
Diplomat US Mission
The Myanmar government should allow and help the three-member fact-finding mission of the UNHRC come into the country to probe rights allegations in northern Rakhine, saidastatement released by the ambassador.
“No one should face discrimination or violence because of their ethnic background or religious beliefs. It is important that the Burmese government allow this fact-finding mission to do its job,” the statement said.
အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ UN ကိုယ်စားလှယ် နီကီ ဟာလေ က မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ UNHCR က စေလွတ်တဲ့ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး ကော်မတီကို ခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
သူထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ " မြန်မာအစိုးရဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပြသနာတွေကို စုံစမ်းဖို့ စေလွတ်တဲ့ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး ကော်မတီဝင် ၃ ဦးကို ခွင့်ပြုပြီးလိုအပ်တာတွေ ကူညီသင့်တယ်လို့ ပါပါတယ်။
မည်သူတဦးမှ လူမျိုးရေးသို့မဟုတ် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် ခွဲခြားခံရတာ ဒါမှမဟုတ် အကြမ်းဖက်ခံရတာတွေ မကြုံတွေ့သင့်ဘူး လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
Source : Myanmar Times , US Diplomat
Also tagged with one or more of these keywords: Diplomat, US, Mission
US to give $32M for Myanmar's refugees
Started by BurmeseNews , 21 Sep 2017 US, Dollar
Started by BurmeseNews , 06 May 2017 Refugees, US
Started by BurmeseNews , 31 Dec 2016 US, relation